Ninna Maankii ma saluugo - Bogga2 - Hoyga Aqoonta
Hoyga Aqoonta > Hoyga Murtida > Halxiraale & Xujooyin
Ninna Maankii ma saluugo
Magaca xubneed I xusuuso
Is Qorid Horudhac Bille Baaritaan Ka qayb galka maanta Dhammaan qaybaha oo dhan ka dhig mid la'akhrisan karo.
Halxiraale & Xujooyin Halxiraale iyo xujooyinkaa lagu soo bandhigayaa.
Laga bilaabo2illaa2 < 1 2
Qalabka mowduuca Noocyada muujinta mowduuc
Kaqayb Galka : ( 11 )
Nambarka Xubinka :
Taariikhduu xubinku is qoray golaha :
ka qayb galka : n/a
Isku cel-celinta qiimaynta heereed :
Sumcada Xubinka :
Jawaabta: Ninna Maankii ma saluugo
Waxaa la qoray : [ 11-03-2015 ]
Ka qayb galkan waxaa horay u qoray oo diyaariyey Maruf
Asc Asxbta dhamaantiin waa idin salaamay. Runti waan la dhacay arimaha iyo garaad kordhinta aad meesha ku haysaan. Bal aan isku barano midaan.
waxaad haysataa 7kiilo oo dahab ah oo iskudhagan. waxaad timid muqdisho adigoo safar ah, magaalada qofna kama taqaanid, waxaad rabtaa inaad Kismaayo u gudubtid, waxaaana loo soconaa 7 habeen, waxaad heshay hal nin oo ku caawiya kuna geeya kismaayo, lkn waxaad ku heshiiseen in habeen walbo aad siiso 1kiilo oo dahab ah. ma dhihi kartid halmar ayaa ku wada siinaa ama 2 habeenba mar, waa inaad siisaa habeen walbo 1kiilo, dheeri majiro, naaqus majiro. sidaa ogtahay dahabka waa isku dhaganyihiin, waxaad u baahtahay inaad jarjarto, sida daraateed waxaad haysataa 2 mindi, lkn midiiba hal mar ayaa isticmaali kartaa, mar labaad ma shaqeyneeso waa (one time use). ugu dambeyn waxaa la gaaa rabaa inaad ninkaas wixiisa siiso si aad u gaarto Hadafkaaga.
F.G. u qaado wax walbo sida aan u qoray.
By: Amin Maruf
walaahi sxb masaladaan inaad furtaa fiican ana ku wareeray dadkuna kajawaabi waaye
Kaqayb Galka : ( 12 )
Waxaa la qoray : [ 16-07-2016 ]
Marka hore waxaan ukala jarayaa 1kg,2kg iyo inta soo hadha oo 4kg ah.
1- habeenka 1aad 1kg sii.
2- habeenka 2aad 1kg ka qaado oo 2kg sii.
3-Habeenka 3aad 1kg ugu dar.
4-Habeenka 4aad 3dii ka qaado oo 4kg sii.
5-Habeenka shanaadna 1kg ugu dar afartii uu haystay.
6-habeenka 6aadna 1kg ka qaado oo 2kg sii iyo 4tii uu haystey.
7-habeenka 7aadna 1kg ugu dar.
mahadsanidiin magacaygu waa yusuf suudi cabdi gudomiyaha Tartan iyo Tacliin ee dugsiyada sare ee puntland.
wixii faahfaahin igala soo xiriir (Suudi111@gmail.com)
Kaqayb Galka : ( 13 )
Waxaa la qoray : [ 05-11-2016 ]
Asc wr wb Marka koowaad magaceygu waa Maha waxaana deganahay magaalda Nairobi hadaan isu dayo jwbta waa waxaan isticmaalaya mindideyda 1 anoo jaraya 1kg hadana waxaan isticmaalaya mindideyda 2aad anoo jaraya 2kg oo dahab ah markaas ayay iigu jarmayaan 1kg,2kg&4kg markas ayan habenki koowaad siinaya 1kg oo dahab ah habenkii 2aadna waan ka qaadan oo waxaan siinaya 2kale oo aan haystay markas ayan habenki 3aadna aan ugu darayaa midkii ii jarna habeenkii 4aadna kuli waan ka wada qaadan oo wxan siinaya 4kg ee ayagana ii jarnaa habenki 5aad ayan ugu darayaa midki 1kg ahaa ee aan ka ceshay markas aan habenki 6aadna waan ka noqsan midki 1kg ahaa ee 2da isku dheganaa ayaan siinaya markaasan habenki 7aad siinaya midki iidhinaa sidaas ayaana Ku tagay halkaan rabay plz jwbteda haday sax tahay iyo haddii kale adaan ka sugaya
Kaqayb Galka : ( 14 )
Nambarka Xubinka : 24
Taariikhduu xubinku is qoray golaha : Mar 2011
ka qayb galka : 370
Isku cel-celinta qiimaynta heereed : 23
Waxaa la qoray : [ 06-11-2016 ]
Maha waannu kaaga mahad celinaynaa haddaannu nahay maammulka isku daygaagan cajiibka ah, waxaannu sugnaa waa qoraaga su'aashan inuu kaaga soo war celiyo.
Saxiixa : Afrikaan
Ilaahay Ha barakeeyo Afrika
Arag faylkiisa gaareed
Warqad gaara u dir Afrikaan
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Afrikaan
Kilmadaha la'isla ogyahay (Tags)
7kiilo, arimaha, asc, asxbta, barano, dahab, dhacay, dhamaantiin, garaad, haysaan, haysataa, iskudhagan, kordhinta, magaalada, maskaxdaada, meesha, midaan, muqdisho, qofna, runti, safar, salaamay, taqaanid, timid, tuuji
« Mowduucii hore | Mowduuca xiga »
Arag boggaaga daabacaadda mowduuc
Mowduucan u dir saaxiib
Noocyada muujinta mowduuc
Aragga caadiga ah
U wareegid aragga horumareed
U wareegid aragga Geedeed
Talooyinka ka qayb qaadashada
Ma hal abuuri kartid Mowduuc cusub.
Waad ka jawaabi kartaa Mowduucyada
Ma raacin kartid faylkan lammaane
Ma'awooddi inaad ka qayb galkaagii wax ka beddesho
BB code is waa la heli karaa
Ilka caddaymaha waa la heli karaa
Kowdka [IMG] waa la heli karaa
Kowd-ka HTML Taagan
Ka gudbid dhakhso ah.
Looxa maaraynta xubneed Warqadaha Gaarka ah ka qayb qaadashooyina Inta hadda joogta Ka baara golaha Beejka u horreeya Hoyga Barnaamijyada Golaha Barnaamijyada Golaha Barnaamijyada sharraxan Rukunka Diinta Aqoonta Diinta Istuudiyaha Sawirada Sawirrada Aqalka Aqoonta Guud Aqoonta Guud Su'aalaha iyo jawaabaha Hoyga Aqalka Kumbiyuutarka % Internet-ka Kumbiyuutarka & Internet-ka Su'aalaha kumbiyuutarka Hoyga Murtida Maahmaahyo Halxiraale & Xujooyin Sheekooyinka Gabayada
Faallada Feesbuuk oo uu tarjumay - Hoyga Aqoonta
Saacaddu hadda waa 04:36 AM.
Nala soo xiriir - Hoyga Aqoonta Guud - Kaydka - Kor u kac
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Waxaa tarjumay Faysal.Saacid.Shire
Qoraalka qofka soo bandhigay ayaa ka mas'uul ah, ee goluhu shaqo kuma leh. Xuquuqda waxaa iska leh Hoyga Aqoonta Barnaamijcom